ဦး ကျောက်ခဲ has written 50 post in this Website..
​ရှော့မရှိနိုင်​ပါ​ကြောင်းးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2910
** နာမည်ပြောင်းရင် ကင်ပွန်းတပ်ပွဲလေးတော့လုပ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2288
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2910
ဒီမှာက အဖော်အပေါင်းလည်းမရှိ ၊ ပျင်းရင် ကော်ဖီနဲ့ အလွမ်းဖြေရတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6373
ဘဘကြီးခေါ်ပြီး ခေါင်းနဲ့ခွေ့ရင် နံကျိုးကိန်းလည်းရှိတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12494
အဆိုတော် မမဂျီးတော့ ဖွင့်မီပြောရဲဘူး ၊ ရှော့စိလယ်… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14637
ကောင်းသား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2910
နောက်ဘွမှာ မဟာသမုဒ္ဒယာထဲ ကူးခတ်ဖို့ဇောကပ်နေပါဦးမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14637
ထွက်ပြီးမှထွက်မှာပါ..။ အသက်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1694
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1694
ဦးကျောက်ခဲ says: နောက်ဆုံးမီးစာရဲ့ တောက်လောင်ချင်းပေါ့ကွီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12322
ဦးကျောက်ခဲ says: Life means “Live and Learn” လေ ကိုရင်ရဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1997
Was this answer helpful?LikeDislike 14637
မှတ်ထားမှ.. အဲ.. အဲ.. မှတ်သားစရာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2910
Was this answer helpful?LikeDislike 3726
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဟိ ထင်တော့ထင်သား . . . အဘိုးကြီးနဲ့ ဘာညာတော့မယ်လို့ . . . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2910
WordPress.org	Recent Commentsဇီဇီ on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီkai on အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မေလ ၂၀၁၇သျှားသက်မာန် on တကယ်ငိုသင့်ချိန်သျှားသက်မာန် on ဆရာကြီးလား ဘာလားဆိုသူများသို့…သျှားသက်မာန် on အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့်သျှားသက်မာန် on အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မေလ ၂၀၁၇kai on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီkai on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီဇီဇီ on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီကျော်လွင်ဖြိုး on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီဇီဇီ on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီဇီဇီ on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီလုံမလေးမွန်မွန် on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီသျှားသက်မာန် on HaHa သောသူ အသက်ရှည်၏သျှားသက်မာန် on ခေတ်နဲ့အညီ . . ထီ ထီ ထီCategory	Arts & Humanities